टिप्स् — onlineakhabar.com
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | ९६ पटक हेरिएकोसमाचार
घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस्, यसले गर्दछ अनेकौं फाइदै फाइदा
घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस्, यसमा हुन्छन् अनेकौं गुण घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस्, यसमा हुन्छन् अनेकौं गुण काठमाडौं, २२ भदौ — यो पृथिवीमा कुनै पनि चीज व्यर्थ छैनन् । हामीलाई झारपातहरूको महत्त्व नै थाहा छैन । जस्तै, हाम्रो घरमा अनि पर्खालमा भेटिने झारपात पर्सलेन पनि धेरै गुण भएको बिरुवा हो । हामी यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछौं । तर यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा भेटिन्छन् । यो बिरुवाको स्वाद पनि गजबको हुन्छ र यसको पोषण पनि राम्रो हुन्छ । यो बिरुवामा ओमेगा ३ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । ओमेगा ३ खासमा फ्याट्टी एसिड हो र यो माछा, अण्डा र...Read More
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | ८४ पटक हेरिएकोसमाचार
खान–पिनमा शौकीन व्यक्तिलाई कुनै विशेष खाद्य पदार्थको लाभ तथा हानीबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरुलाई त्यो कुराले फरक पनि पर्दैन । किनकी त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन खानेकुराको स्वाद मनपर्यो, त्यसलाई नखाइ छाड्दैनन् । तर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नेहरु हरेक समयमा हरेक खाद्य पदार्थको राम्रा तथा नराम्रा गुणबारे जानकारी हासिल गर्न इच्छुक हुन्छन् । यसकारण यो आलेखमा हामी तपाईलाई भटमास (सोयाबीन)सँग सम्बन्धित केही कुराहरु बताउँदै छौं । भटमास, जसलाई प्रोटीनको स्रोत मानिन्छ । यसको अतिरिक्त भटमासमा भिटामिन–ए पनि भरपूर मात्रामा पाइन्छ । भटमास खाँदा शरीरमा एमिनो एसिड उत्पन्न हुन्छ । जो शरीरलाई फिट राख्न धेरै आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति जो धेरै शारीरिक...Read More
प्रकाशित : पौष १८, २०७४ | ११६ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । कुनै केटा मन परेको छ र उसँग नजिकिन सकिरहनु भएको छैन ? यदि यस्तो संकट सामना गरिहनु भएको छ भने चिन्ता नलिनिुस्,तपाईलाई मन परेको केटा केही उपाय प्रयोग गरेर लाइनमा आउन सक्छन्, तपाईलाई मन परेका केटा तपाईको माया जालमा छिट्टै पर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि तपाईले केही कुरामा विशेष चनाखो भने हुनैपर्छ : ड्रेसअपमा ध्यान दिनुहोस् : मानिसलाई आकर्षण गर्ने अर्को तरिका भने लवाई वा ड्रसअप नै हो । लवाइले मानिसमा थप आकर्षक बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले आफ्नो लवाईमा सधै सचेत हुनुहोस् । तर तपाईले आफ्ना लवाईमा भने यो विचार पुर्याउनुहोस् कि उसले कस्तो कपडा लगाउँदा तपाईप्रति उ...Read More
प्रकाशित : पौष १६, २०७४ | ३९० पटक हेरिएकोसमाचार
बुढेसकालमा पनि यसरी लिन सकिन्छ सेक्सको मजा, मनोविद करुणा कुँवरले दिइन् सुझाब
म ४८ वर्षे स्वस्थ पुरुष हुँ । पाँच वर्षअघि मेरी श्रीमतीले मलाई केही नभनी अरु कसैसँग विवाह गरिन् । केही वर्षसम्म उनलाई सम्झेर मेरो जीवन बित्यो । पहिले अरु महिलाप्रति मेरो उति राम्रो दृष्टिकोण थिएन । तर, विस्तारै पुरुषको जीवनमा महिलाको अभाव खट्किँदै गयो । र, मैले पुनः वैवाहिक जीवन शुरु गर्ने निधो गरेँ । एउटी ३९ वर्षीय अविवाहित महिलासँग विवाह गरेँ । मैले दोस्रो बिहे गर्नुको कारण सामाजिक, शारीरिक र भावनात्मक सुरक्षा थियो । तर, दाम्पत्य जीवनका क्रममा म दोस्री श्रीमतीबाट शारीरिक रुपमा सन्तुष्ट हुन सकिनँ । उनलाई पनि सन्तुष्टि दिन नसकेको महशुस भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो...Read More
प्रकाशित : पौष १६, २०७४ | १७० पटक हेरिएकोसमाचार
५० वर्षदेखि घरको पछाडि रहेका माटोको भाँडा खोलेर हेर्दा… पलभरमै भयो यस्तो चमत्कार
कुनै समय केही मानिसको भाग्य छेनभरमै चम्किन्छ। देख्दादेख्दै पलभरै उनीहरु करोडौँका मालिक बन्छन्। क्यालिफोनिर्यामा बस्ने एक जोडीको भाग्य एक मिनेटमै चम्किएको छ। उनीहरु १५० वर्ष पुरानो घरमा बस्दै आएका थिए। एक दिन कुकुरलाई घुमाउन बाहिर निस्किएका बेला उनको आँखा कयौँ पुरानो अनौँठो चिजमा ठोकियो। उनी नजिक गएर हेरे । त्यहाँ उनले माटोका भाँडा भेटाए। त्यसपछि उनले ती माटोको भाँडालाई बाहिर निकालेर हेरेपछि अचम्मित बने। ती माटोको भाँडो सुनका सिक्काले भरिएका थिए। उनले ती भाँडोलाई घरमा लगेर गए र त्यसको परीक्षणका लागि मानिस बोलाए। परीक्षणकर्ताले ती जोडीलाई ती सिक्का सुनको भएको जानकारी दिए। पहिले पनि उनी त्यो बाटोमा धेरै पटक हिँडिसकेका...Read More
प्रकाशित : पौष १५, २०७४ | ९५ पटक हेरिएकोसमाचार
कुकुर पाल्दा हर्टअट्याक संभावना कमी हुने देखी लिएर यस्ता यस्ता फाइदा हुन्छन्
काठमाडौँ । कुकुर घरपालुवा स्तनधारी जनावर हो । घरको सुरक्षाका लागि पालिने कुकुरलाई स्वामी भक्त प्राणीको रूपमा लिइन्छ र यो मानिसहरूसँग अत्यन्त मिलेर बस्न सक्दछ । कुकुरको सुन्ने र सुँघ्ने शक्ति अत्यन्त तिक्ष्ण हुन्छ । घरको रेखदेखको लागि पालिने कुकुर मानिसहरूले शोखका लागि पनि पाल्ने गर्छन् । शिकार गर्न सहयोग गर्ने उत्तम घरपालुवा जनावरको रूपमा केही मानिसहरूले कुकुर पाल्ने गर्दछन् । कुकुरले सधैँ आफ्ना मालिकको आज्ञा मान्ने भएकाले पनि कुकुरको इमान्दारिताको कदर गर्ने गरिन्छ । त्यसैले मानिसहरुबीचमा कुकुर निकै लोकप्रिय घरपालुवा जनावर हो । स्वीडिस अनुसन्धानका अनुसार कुकुर पाल्नाले मालिकको हृयद रोगको जोखिम कम हुन्छ । ४० देखि ८० वर्षसम्मका...Read More
प्रकाशित : पौष १५, २०७४ | १४१ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । हाम्रो नेपाली समाजमा थुप्रै मूल्य मान्यताहरु रहेका छन् र त्यस्ता कतिपय मान्यताहरु हामी चाहेर पनि नकार्न सक्दैनौ । हाम्रा पूर्वजहरुले मान्दै आएका कतिपय कुराहरु शनिबारसँग पनि जोडिएका छन् । शनिदेवमाथि नराम्रो असर नपरोस् भनी हाम्रा पूर्वजहरुले थुप्रै नियम बनाएका छन् । ज्योतिषका अनुसार शनिको असरबाट बच्नका लागि यस्ता मान्यताहरु छन् जसलाई शनिबारका दिन हामीले गर्नुहुँदैन । शनिबार जन्मने व्यक्तिले अवश्य पढ्नुहोस् आउनुहोस् यस्तै केही कामबारे जुन हामीले शनिबारको दिन गर्दा शनिदेव रिसाउँछन् भन्ने मान्यता छ । तेल, तेललाई शनिको अतिप्रिय मानिन्छ र शनिबार तेल दान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दिन तेल घरमा ल्याउँदा घरमा गरिबी र रोग निम्तिने...Read More
प्रकाशित : पौष १५, २०७४ | १६१ पटक हेरिएकोसमाचार
महिलालाई दिनमा कति पटक र कुन कुन बेला सेक्स गर्न मन लाग्छ ?
अमेरिकाको एक कलेजमा गरिएको अध्ययन रिपोर्टमा महिलाहरुका बारेमा केहि आश्चर्यजनक तथ्यहरु सार्वजनिक गरिएको छ । जानौँ त्यो तथ्यको बारेमा… यो रिसर्च अमेरिकाको एक कलेजमा अध्ययनरत २८३ जना छात्राहरुमाथि गरिएको छ । उनीहरुको उमेर १८ देखि २५ को बीचमा थियो । उनीहरुसँग सुत्ने, खाने–पिउने र सेक्सको बारेमा अध्ययनका लागि सोधिएको थियो । यदि तपार्इँलाई लाग्छ कि पुरुषहरु मात्र सेक्सको बारेमा सोच्छन् भने तपाई महिलाहरुलाई त्यस विषयमा कम मूल्याकंन गर्दै हुनुहुन्छ । अध्ययनका अनुसार महिलाहरु सेक्सको बारेमा धेरै सोच्छन् । अध्ययनका लागि छात्राहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो, जब तपाईँलाई सेक्स सँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा मनमा आउँछ भने त्यसलाई नोटको रुपमा टिपोट गरेर...Read More
प्रकाशित : पौष १३, २०७४ | १०६ पटक हेरिएकोसमाचार
तपाईको उमेर कति भयो ? र, उमेर अनुसार कति सुत्नु आवश्यक ? जानी राखौं
मानिसलाई स्वास्थ रहनको लागि पौष्टिक खानाका साथै पर्याप्त निद्रा पनि अत्यावश्यक हुन्छ । तर आफ्नो विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरू पर्याप्त सुत्दैनन् जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ नै । हालै अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानअनुसार, हाम्रो शरीरलाई हाम्रो उमेरको हिसाबले निश्तिल अवधिको निद्रा पूरा गर्नुपर्छ । निद्रा पूरा लिँदा मात्र हामी विभिन्न रोगबाट बच्न सक्छौं । उक्त फाउन्डेसनको अनुसार हामीले आफ्नो उमेर अनुसार निम्न समय निद्रा लिनुपर्छ ३ महिनासम्मको बच्चाले १४ देखि १७ घन्टासम्म सुत्नुपर्छ । ४ देखि ११ महिनाको बच्चाले १२ देखि १५ घन्टासम्म सुत्नुपर्छ । १ देखि दुई वर्षको बच्चाले ११ देखि १४ घन्टासम्म सुत्नुपर्छ । ३ देखि...Read More
प्रकाशित : पौष १३, २०७४ | १३५ पटक हेरिएकोसमाचार
बेनी, म्याग्दी, १३ पुस । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले ‘विदेश पनि जान्न, जागिर पनि खान्न’ भन्ने अडानका साथ रु एक हजारको लगानीबाट कृषि पेशा शुरु गरेका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराका चन्द्रबहादुर कार्की अहिले रु एक करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक बन्न सफल हुनुभएको छ । सँगै पढेका साथीहरु अहिले कृषि वैज्ञानिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृतलगायत निजामती सेवाको उच्च तहमा पुगेका भएपनि कार्कीको प्रगति देखेर उनीहरु पनि आश्चर्य चकित हुने गरेका छन् । २०३४ सालमा १८ वर्षको उमेरदेखि रु एक हजारको लगानीबाट कृषि पेशा शुरु गरेका कार्की अहिले जिल्लाका नमूना कृषक र कृषि पेशाबाट नै सामाजिक सेवामा सक्रिय व्यक्तिका रुपमा चिनिनुहुन्छ ।...Read More